နိုင်ငံရေးအမြတ်များနှင့် ကျွန်တော့အတွေးသက်သက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နိုင်ငံရေးအမြတ်များနှင့် ကျွန်တော့အတွေးသက်သက်
Posted by သခင်သူရိန် on Mar 27, 2013 in Copy/Paste |3comments
လက်ရှိဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသော အဖြစ်အပျက်များမှာ နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းအရ အင်မတန် အန္တရာယ်များသော အခြေအနေဟု ထင်မြင်မိပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေများအား စဉ်းစားပေးကြနိုင်ရန်နှင့် ကျွန်တော်၏ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ခံယူထားသော တွေးမြင်ထားသော အချက်များအား တင်ပြ ရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် ဝေဖန်ဆွေးနွေးပေးကြပါကုန်…
လှုပ်ရှားမှုများအား စည်းရုံးလှုံဆော်ကာ ပြသာနာများအား ဖြစ်ပွားစေသည်ဟု အစိုးရအဖွဲ့ နှင့် တပ်မတော်အား သံသဃ ရှိနေပါသည်ဟု အချို့မှ ပြောဆို ဝေဖန်မှုများ ရှိနေပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အချက်အလက်များအား ဝိုင်းဝန်း စုစည်း ဝေဖန်ကြပါကုန်…
၁) ကုလားများမှာ အတိုက်အခံအဖွဲ့များနှင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားနေခြင်းကြောင့် ပညာပေးခြင်း။
၂) တရားမဝင် ပေးအပ်ထားသော မှတ်ပုံတင်များနှင့် နေထိုင်ခွင့်များအား ပြန်လည်စီစစ်လိုခြင်း (သို့) အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည်ထုတ်ပေးလိုခြင်း။
မှတ်ချက်။ ။ဘင်္ဂါလီ ကုလားများ (ကမ်းကူးလာသူများ) အား ယခင်က နည်းပေါင်းစုံဖြင့် လာဘ်ပေးကာ မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များအား ငွေပေးစည်းရုံးကာ လှစ်လျူရှု့ပြီး လူမျိုးရေးအမြတ်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ နယ်စပ်မှ ချမ်းသာသွားသော ဝန်ထမ်းများမှာ အထက်ပါ နည်းလမ်းလည်း တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိုသို့ အမြတ်ထုတ်ကာ မှတ်ပုံတင်အတုများအား ဖန်တီးထားခြင်း၊ နေထိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြင့် အသစ်တစ်ဖန်၊ လူဦးရေ စာရင်းနှင့် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ခံရာတွင် စည်းစနစ်ကျခဲ့ပါက အလိမ်ပေါ်ကာ အထက်ပါ ဒေသများတွင် တာဝန်ကျခဲ့သော အရာရှိများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် ပြသာနာ ကြီးထွားလာပြီး တရားစွဲဆို အရေးယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်ခြင်း။ ယခုအခါ ကုလားများ၏ အိမ်များမှာ မီးလောင်ပျက်စီးသွားသောကြောင့် မှတ်ပုံတင်များအား ပြန်လည်စီစစ်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မှတ်ပုံတင်များအား ပျောက်ဆုံးအဖြစ် အားလုံးအား ထုတ်ပေးကာ ရွှေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်စေမည် ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင် ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် လာဘ်လာဘများလည်း အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည် ရယူနိုင်ကြတော့မည်။
၃) ကုလားများ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ပက်သက်ကာ နယ်သစ်၊ ပယ်သစ်တောင်းဆိုခြင်း။
၄) ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများအား မကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း။
၅) လူဦးရေ အဆမတန်တိုးပွားလာခြင်း။
၆) မြန်မာအမျိုးသား ခရိုနီများနှင့် စီးပွားရေးပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်လာခြင်း။
၇) တစ်ကျွမ်းပြန်အာဏာ အဖြစ် စစ်အာဏာရှင်စနစ်သို့ ပြန်လည်ရယူ ပုံဖော်လိုခြင်း။
၈) တပ်မတော်အား လွှတ်တော်တွင် ပါဝင်ပက်သက်မှု၊ အစိုးရအဖွဲ့ အောက်တွင် ပြောင်းရွှေ့ထားခြင်းအား မကျေနပ်ခြင်း။
၉) ယခင် စီးပွားရေးသမား အမြတ်ကြီးစား ခရိုနီများဖြင့် လမ်းဟောင်းအတိုင်း အမြတ်ထုတ်လိုခြင်း။
၁၀) ဒီမိုကရေစီစနစ်အရ တံခါးဖွင့်ထားသော စီးပွားရေးများတွင် ဝင်ရောက်လာမည့် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား နိုင်ငံရေးအခြေအနေအရ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ့ရန် နောက်တွန့်စေခြင်း။
၁၁) အလုပ်ရှုပ်၊ ပြသာနာရှင်းနှင့် စိုးရိမ်ကြောင့်ကျ ဖြစ်ကာ ပြည်သူများ လွှတ်တော်အား အာရုံစူးစိုက်မှု့ လျှော့နည်းအောင် လုပ်ခြင်း။
၁) ပြသာနာများအား စတင်ဖန်တီးကာ အစိုးရနှင့် တပ်မတော်သို့ ပုံချခြင်း၊
၂) ပြသာနာများအား ပြေလည်အောင် လိုက်လံဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် နာမည်ကောင်းရယူခြင်း။
၃) လူအများအား စည်းရုံးပြီး၊ မဲဆွယ်ပြီး အသင့်ဖြစ်နေခြင်း၊ ထောက်ခံမှုအား ကောင်းလာခြင်း၊
၄) လက်ရှိအစိုးရအား ဖိအားများစွာ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊
၅) အလုပ်ရှုပ်၊ ပြသာနာရှင်းခြင်းဖြင့် လွှတ်တော်မှ လက်ရှိအစိုးရအား ဖိအားပေး ပြောင်းလဲစေခြင်း။
၆) ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများအား မကြိုက်နှစ်သက်တော့ခြင်း။
၇) မဒိမ်းမှု၊ ရမ်းကားမှု့၊ ဘာသာရေးအစွမ်းရောက်မှု့ စသည့်အခြေခံသဘာဝများမတူညီခြင်း။
၁) ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုများအား မကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း။
၂) မဒိမ်းမှု၊ ရမ်းကားမှု့၊ ဘာသာရေးအစွမ်းရောက်မှု့ စသည့်အခြေခံသဘာဝများမတူညီခြင်း။
၃) အမျိုးဘာသာ သာသနာအား စောင့်ရှောက်ထိမ်းသိမ်းလိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ခံစားချက်များ ပြင်းထန်လာခြင်း။
၁) လူနည်းစုများ၏ သဘာဝအရ စုစည်းကာနေခြင်းသည် သဘာဝတရားဖြစ်ပါသည်။ ကျောက်ခေတ်မှသည် ယခုခေတ်အချိန်အထိ ကျွန်တော်တို့၏ ညီအကို မောင်နှမများအားလုံးသည် လူနည်းစုအဖြစ် နိုင်ငံရပ်ခြားတွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာတွင်လည်း နီးဆက်ရာ စုစည်းကာ နေလေ့ ရှိပါသည်။ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကူညီပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုလူနည်းစုများမှာ ယခုအခါ ပြသာနာများ ဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်သဖြင့် ပိုမိုစုစည်းသွားတတ်ပါသည်။ ပို၍ စည်းလုံးသွားတတ်ပါသည်။ ဖိအားများလျှင် စိတ်ခံစားချက်လည်း များလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းကဲ့သို့ ကုလားရပ်ကွက်အဖြစ် သီးခြားရပ်တည် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်လည်း သတိနှင့် အန္တရာယ်များ ပိုရှိလာနိုင်သလို ရန်စ၊ ရန်လိုမှုများလည်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ ပြသာနာသည် သေးသွားမည် မဟုတ်ဘဲ ကြီးလာဖို့သာ ဖြစ်နေပါမည်။
၂) လူမျိုးစုတိုင်းတွင် စိတ်နှလုံးမကောင်းသူ၊ စိတ်ယုတ်မာရှိသူ၊ စိတ်ကောင်းရှိသူ၊ သနားညှာတာတတ်သူ၊ ရိုင်းဆိုင်းသူ၊ သိမ်မွေ့သူ များ ပါဝင်နေတတ်ပါသည်။ ထိုသူများထဲတွင် ကျွန်တော်တို့သည် မည်သို့သော သူများဖြစ်ပါသနည်း? မနာလိုစိတ်ထားပါ၊ မယုတ်မာပါနှင့်၊ သို့ဆိုလျှင် အများတိုးတက်သွားသည်။ ဘာကြောင့်တော်သွားသည်၊ တိုးတက်သွားသည်ကိုသာ ကြည့်ကြပါမည်။ နည်းလမ်းကို စဉ်းစားနိုင်ပါက ထိုနည်းအတိုင်း တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားပါမည်။ ယုတ်မာကောက်ကျစ်သော အမူအကျင့်များဖြင့် တိုးတက်မှု့ကို မရှာကြပါနှင့်။
၃) မိမိအမျိုးဘာသာ သာသနာအား နှိပ်ကွပ်သူများကိုသာ လူဆိုး၊ လူမိုက်များအဖြစ် မြင်ပါသည်။ လူအချင်းချင်း လှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။ မိမိသည် ထိုဘာသာအား ကိုးကွယ်ပါ၏ သို့သော် ထိုဘာသာ၊ သာသနာအား မိမိကိုယ်တိုင် နှိပ်ကွပ်ဆော်ကားပါက မကိုးကွယ်ခြင်းသည်သာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုး၊အကောင်း ဒွန်တွဲ မြင်စေ၊ တွေးစေလိုပါသည်။
၄) ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်ကာ ကြည့်စေလိုပါသည်။ မြန်မာတွေ အမြင်ရှင်းဖို့လိုပါပြီ။ လုံလောက်သော အတွေးအခေါ် အယူအဆများအား မျိုးဆက်သစ်များအား လက်ဆင့်ကမ်းကြစေလိုပါသည်။ ကျွန်တော်သူရိန်၏ ခံယူချက်သက်သက်ဖြစ်ပါသည်။ သနားစရာ နယ်မှ တောသူတောင်သားများ၏ ရိုးသားသော၊ သန့်ရှင်းသော၊ မွန်မြတ်သော စိတ်ထားများအား အရောင်းမဆိုးကြပါနှင့်။
မှတ်ချက်။ ။ အမှားပါရင် ခွင့်လွှတ်စေလိုပါသည်။ အတွေးအခေါ် သက်သက်ဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါစာစုအား အိပ်မရ၍ ရေးပါသည်။ သူရိန်ငိုနေသည်၊ ရယ်နေသည်။ နိုင်ငံရေး ကံစမ်းမဲများ မနှိုက်မိကြပါစေကုန်။
သခင် သူရိန် has written7post in this Website..
မီးအချိန်ပိုင်းနှင့်လာသော၊ အင်တာနက် ကော်နက်ရှင်အလွန်နှေးသော၊ အင်မတန်ကျဉ်းမြောင်းသော အခန်း၊ မလွှတ်လပ်သော ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်သော ရန်ကုန်တွင် မွန်းကျပ်စွာနေရင်း ကြီးပြင်းခဲ့ရသည့် ကျွန်တော် သူရိန်သည် အများအမြင်ကပ်လောက်သော "သခင်" ဆိုသည့် စကားစုကို ယူသုံးမိပါသည်။ "သခင်" ဆိုသည့် အနက်အဓိပ္ပါယ်သည် မြောက်မြားလှစွာသော အမျိုးမျိုးသော ဘဝအတွက် လိုအပ်နေသော လိုအပ်ချက်များကို မြင့်မြတ်စွာ တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်ရန် နည်းလမ်းပြပေးနေသည်ဟု ခံယူလျှက်…."သခင်မျိုးဟေ့.... ဒို့ဗမာ"
View all posts by သခင်သူရိန် →
၄) ဥာဏ်နှင့်ယှဉ်ကာ ကြည့်စေလိုပါသည်။ မြန်မာတွေ အမြင်ရှင်းဖို့လိုပါပြီ။ လုံလောက်သော အတွေးအခေါ် အယူအဆများအား မျိုးဆက်သစ်များအား လက်ဆင့်ကမ်းကြစေလိုပါသည်။ (Y)
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး.. စစ်ပွဲတွေဖြစ်စေတဲ့.. ကွန်ဖလစ်.. ဘာသာရေးပဋိပက္ခ(ခရူးဆိတ် စစ်) ကို.. မြန်မာပြည်ထဲဆွဲသွင်းရက်သူတွေကို.. မျက်နှာစေ့စေ့ကြည့်.. မေးချင်မိတယ်..
ဘာဖြစ်ချင်တာလည်း.. ဟင်င်.. လို့..။
ကမ္ဘာ့စူပါပါဝါ ၂နိုင်ငံရဲ့.. ပလေးဂရောင်းကလည်း.. မြန်မာပြည်ဖြစ်မှန်းမသိ.. ဖြစ်လာနေတာပဲ..
ဒါကတော့.. ပြည်ပရောက်နိုင်ငံရေးသမားလို့ခံယူထားသူတွေရဲ့.. ကစားကွက်တွေပါ..
နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာ..။ :buu:
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ…… ဖြစ်လာပြီးမှတော့ အကောင်းဘက်ကိုပဲ ဇောင်းပေး စဉ်းစားစေ့ချင်တယ်…။ နို့မို့ဆိုရင် ခေါင်းတွေပူပြီး ဆံတွေဖြူ ကုန်မှာစိုးရတယ်…။ ခုတောင် တစ်လတစ်ကြိမ် ဆတ္တာသည် ဆီ ပြေးပြီး ဆံပင်တွေ အရောင်ပြန်ပြောင်းခိုင်းနေရတာ